(ရဂ၆) နှင့် (၉၆၉) | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ပြန်လည် သင့်မြတ်ရေးအတွက် အစိုးရဦးဆောင်မှု လိုအပ်
ဒီမိုကရေစီ မြေဇာပင် မြန်မာမွတ်စလင်မ် များ »
‎(ရဂ၆), (၉၆၉) နှင့် ၂၀၁၅အစ္စလာမ်သာသနာမှာ ကောင်းမြတ်တဲ့ အလုပ်၊ အပြောတွေကို မလုပ်ခင် (ဘုရားသခင်၏ ဂုဏ်တော်ကို တသပြီး အစပြုပါသည်)လို့ ရွတ်ဆိုရတဲ့ အစဉ်အလာတစ်ခုရှိတယ်။ အာရဗျီစာမှာ အက္ခရာတိုင်းက တန်ဖိုးတစ်ခုရှိတယ်။ မြန်မာစာမှာ က ခ ဂ ဃ င မှာ တစ်ဆိုတဲ့ တန်ဖိုးရှိသလိုပေါ့။ အဲဒီ (ဘုရားသခင်၏ ဂုဏ်တော်ကို တသပြီး အစပြုပါသည်)ဆိုတဲ့ စာပုိုဒ်ကို ရေးသားတဲ့ အာရဗျီစာလုံး တစ်လုံးချင်းတွေရဲ့ တန်ဖိုးတွေကို ပေါင်းလိုက်တော့ စုစုပေါင်း (၇၈၆)ဆိုတဲ့ ဂဏန်းတစ်ခုကို ရခဲ့ခြင်းတယ်။ သို့သော် ဒီ (၇၈၆)ဆိုတဲ့ ဂဏန်းအသုံးပြုခြင်းကို အာရဗ်စကားပြောတဲ့ မူရင်းမွတ်စလင်နိုင်ငံတွေက လုံးဝ လက်မခံကြဘူး။ အသိအမှတ်လည်း မပြုဘူး။ မလုပ်ကောင်းဘူးလို့ တားမြစ်ကြတယ်။ အာရှက မွတ်စလင်အချို့ကသာ အာရဗျီစကား အားနည်းမှုပေါ်မှာ အခြေခံပြီး လွယ်ကူမှုအနေနှင့် အသုံးပြုနေကြတာဖြစ်တယ်။ ဒါကိုလည်း တစ်ချို့သော အာရှပညာရှင်တွေကပင် လက်မခံကြတာလည်း ရှိနေတယ်။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ ၇+၈+၆= ၂၁ ဆိုပြီး ၂၁ရာစုမှာ မွတ်စလင်တွေ လွှမ်းမိုးရမယ်ဆိုတာကတော့ မဟုတ်မမှန် တမင်လုပ်ကြံ ထိုးနှက်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ကယ်လို့ အဲဒီလို အကြံအစည်သာရှိရိုးမှန်ရင် (၇၈၆)ကို အခြားမွတ်စလင်နိုင်ငံတွေ၊ အထူးသဖြင့် အစ္စလာမ်စတင် ပေါ်ထွန်းရာ အာရဗ်နိုင်ငံတွေက အသိအမှတ်ပြု သုံးစွဲရမှာပေါ့။ အခု မြန်မာတွေ ကမ္ဘာပါတ်နေကြပါပြီ။ ဘယ်အာရဗ် မွတ်စလင်နိုင်ငံတွေက (၇၈၆)ကို အသုံးပြုတာ တွေ့ဖူးပါသလဲလို့ မေးခွန်းထုတ်ချင်ပါတယ်။ နောက်တစ်ချက်က မြန်မာမွတ်စလင်တွေက သူတို့နဲ့ ဘာသာတူဆိုင်တွေမှာသာ ရွေးချယ်အားပေးတယ်ဆိုတဲ့ စွပ်စွဲချက်ဖြစ်ပါတယ်။ မွတ်စလင်တွေမှာ အစားအစာ (Diet) ကန့်သတ်ချက်က ဘာသာရေးဆိုင်ရာ အဓိကလိုက်နာရမဲ့ အချက်ကြီးဖြစ်နေတာကို အားလုံးသိကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် အစားအစာနှင့် ပတ်သက်ရင် ဘာသာတရားရဲ့ လိုအပ်ချက်အရ ဘာသာတူဆိုင်တွေမှာ ယုံကြည်စိတ်ချစွာ စားသုံးချင်ကြပါတယ်။ ကျန်တဲ့ပစ္စည်းတွေ ရောင်းဝယ်ဖေါက်ကားရာမှာတော့ လူ့သဘာဝအရ ဈေးသက်သာရာ၊ ဆက်ဆံရေး ကောင်းရာ၊ အဆင်သင့်ရာ၊ ပစ္စည်းမှန် ဈေးမှန်ရရာ ဘာသာမရွေး လူမျိုးမရွေးဆိုင်တွေမှာဘဲ ရောင်းဝယ်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပစ္စည်းမှန်၊ ဈေးမှန်ရောင်းဝယ်နေကြတဲ့ မြန်မာ၊ တရုပ်၊ မွတ်စလင်ဆိုင်တွေမှာ လူမျိုးစုံ ရောင်းဝယ်ဖေါက်ကားနေကြလို့ အရောင်းအဝယ်ကောင်းနေကြတာကို အားလုံးသိနေ၊ မြင်နေကြတာပါဘဲ။ အတုယူလိုလျှင် အတုယူနိုင်ကြပါတယ်။ မွတ်စလင်တွေနှင့်သာ ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရမယ်လို့ အစ္စလာမ်ဘာသာတရားက သင်ကြားထားတာ မရှိပါဘူး။ ဘယ်ဘာသာမှ ဘာသာတူသာ ရောင်းဝယ် ဆက်ဆံရမယ်လို့ မပြဌာန်းကြပါဘူး။ ဗုဒ္ဓဘာသာကလည်း မပြဌာန်းထားဘူး။နောက်တစ်ချက်က လူနည်းစု လူများစု သဘာဝတစ်ခုကိုလည်း ထောက်ပြချင်ပါတယ်။ လူနည်းစုဟာ လူနည်းစုသဘာဝအရ စုစည်းတတ်ပါတယ်။ လူများစုဟာ လူများစု သဘာဝအရ ပြန့်ကြဲတတ်ပါတယ်။ အခုတိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံ မြန်မာတွေ ထိုင်း၊ မလေးရှားတင်မက အနောက်နိုင်ငံတွေမှာ ရောက်နေကြပါပြီ။ ဘယ်လိုနေထိုင်ကြသလဲ။ ဖြစ်သလို ကြုံရာ နေကြသလား။ တူရာ တူရာ စုနေတတ်သလား။ အခြေအနေအရ ရောက်ချင်ရာ ရောက်နေရင်တောင် ကိုယ့်ဘာသာတူ၊ လူမျိုးတူတွေ ရှိတဲ့နေရာကိုဘဲ ကြိုးစားပြီး ပြောင်းလာကြတာဘဲ။ လူများစုကတော့ ဒီလိုလုပ်စရာ မလိုဘူးလေ။ လူများစုဖြစ်နေတာကိုး။ ဒီအတိုင်းဘဲ မြန်မာပြည်မက ကြိုက်တဲ့မြို့၊ ရွာတွေကိုကြည့်ပါ။ မြန်မာမွတ်စလင်မှ မဟုတ်ပါဘူး။ ရှမ်း၊ ကရင်၊ ချင်း၊ ရခိုင်တွေလည်း တတ်နိုင်သလောက် သူတို့တူရာ တူရာတွေ စုနေကြတာပါဘဲ။ လူနည်းစုဖြစ်ခြင်း သဘောသဘာဝကြောင့် တတ်နိုင်သလောက် အချင်းချင်း ယိုင်းပင်းနေကြတာဘဲ။ ဒါကို အပြစ်တစ်ခုသဘောနှင့် မဟုတ်ဘဲ၊ သဘာဝနှင့် ချိန်ထိုးပြီး အမြင်ရှင်းကြစေချင်ပါတယ်။ သို့သော် အပြစ်ရှာလိုသူတွေအတွက်ကတော့ ဘယ်လို သဘာဝယုတ္တိကျကျ ဆွေးနွေးသော်လည်း လက်ခံကြမှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုလည်း သိထားပါတယ်။ အခုမြန်မာပြည်မှာ (၉၆၉)ဆိုပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ မြင့်မြတ်သော ဂုဏ်တော်သုံးပါးကို အသုံးပြုကာ အဲဒီမြင့်မြတ်တဲ့ ဂုဏ်တော်တွေနှင့် လုံးလုံးလျားလျား ဆန့်ကျင်တဲ့ လုပ်ရပ်တွေကို မြန်မာမွတ်စလင် လူ့အဖွဲ့အစည်း ထိုးနှက်တိုက်ခိုက်ရေး တစ်လွဲလုပ်နေတာ စိတ်မသက်မသာ ကြားသိနေရပါတယ်။ဘုရားဂုဏ်တော် (၉)ပါး၊ တရားဂုဏ်တော်(၆)ပါး၊ သံဃာဂုဏ်တော်(၉)ပါးသည် လူသားတိုင်း လေးစားကြည်ညိုထိုက်တဲ့ ဂုဏ်အင်္ဂါတွေဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီဂုဏ်တော်တွေက လူသားအားလုံးအတွက် မေတ္တာ၊ ဂရုဏာ၊ မုဒိတာ၊ ဥပက္ခာဆိုတဲ့ ဗြဟ္မစိုရ်တရားလေးပါးနဲ့ ပြည့်လျှမ်းနေတဲ့ ဂုဏ်တော်တွေဖြစ်တယ်လို့ သိထားပါတယ်။ မွတ်စလင် မပါဘူးလုပ်လို့ မရပါဘူး။ လူသားအားလုံးနှင့် သက်ဆိုင်တဲ့ ဒီမြင့်မြတ်တဲ့ ဂုဏ်တော်တွေကို ဦးတင်ပြီး လူတစ်ဖက်သားတွေရဲ့ အကျိုးစီးပွါး ပျက်ရာ ပျက်ကြောင်းတွေကို ဘယ်လိုအကြောင်းပြချက်နှင့်မှ မလုပ်သင့်ကြဘူး၊ လုပ်ခွင့်မရှိဘူးလို့ ယုံကြည်ပါတယ်။
ဗုဒ္ဓဘာသာအပါအဝင် ဘာသာတိုင်းဟာ လူသားအားလုံးအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လူမျိုးအတွက်ဘဲဆိုပြီး ပွင့်ပေါ်လာတဲ့ ဘာသာတရား လောကမှာ မရှိပါဘူး။ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာကသာ အမျိုး၊ ဘာသာစွဲခဲ့ပြီး သူ့လူမျိုးတွေ၊ သူ့ဘာသာစကား ပြောတတ်တဲ့သူတွေကိုဘဲ တရားဟောခဲ့မယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုလုပ်ပြီး ကမ္ဘာ့သာသနာတစ်ရပ် ဖြစ်လာနိုင်မလဲ။ မြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင် ကမ္ဘာတလွှားကို ဗုဒ္ဓသာသနာက ဘယ်လို ပြန့်ပွါးလာမလဲ။ ဗုဒ္ဒမြတ်စွာက တရားဦးဟောကြားခဲ့သူတွေ အားလုံးဟာ မူလက ဘာသာခြားတွေ မဟုတ်ဘူးလား၊၊ လူမျိုးခြားတွေ မပါဘူးလား။ ဗုဒ္ဒမြတ်စွာရဲ့ အဂ္ဂသာဝက၊ မဟာသာဝကတွေ၊ အာသောကမင်းကြီးလက်ထက် ကိုးတိုင်း ကိုးဌာနကို ဗုဒ္ဓသာသနာရောင်ဝါ ဖြန့်ကျက်ခဲ့သူတွေဟာ အခုဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မြန်မာအချို့ မိန်ရေ၊ ရှက်ရေ စော်ကားနေကြတဲ့ ကုလားတွေဘဲ မဟုတ်ဘူးလား။ ဘာဖြစ်လို့ လူမျိုးစွဲနေကြတာလဲ။ သတ္တဝါအားလုံးအတွက် ပွင့်ပေါ်ခဲ့တဲ့ ဂုဏ်ယူဖွယ် မြင့်မြတ်သော သာသနာတစ်ရပ်ရဲ့ ထူးမြတ်တဲ့ ဂုဏ်အင်္ဂါတွေကို ဘာဖြစ်လို့ မစဉ်းမစား မတော်မသင့် လုပ်ပစ်နေကြတာလဲ။
စကားကုန်အောင်ပြောရရင် မြန်မာမွတ်စလင်ဆိုင်တွေကို ဒါကြောင့် ဒါကြောင့် မဝယ်ကြနဲ့ ပြောချင် ပြောပါ။ သို့သော် လူသားအားလုံးနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာဂုဏ်တော်တွေကို တလွဲကိုးကား၊ လွဲမှားစွာ အသုံးချပြီး ကိုယ့်သာသနာကို ကိုယ်ကဘဲပြန်ပြီး သေးသိမ်အောင် မလုပ်သင့်ဘူးဆိုတာလောက်တော့ သိထားသင့်ကြပါတယ်။ ကျနော်တို့ မြန်မာပြည်မှာ ခက်နေတာက လူမှန်ရင် ဗြဟ္မစိုရ်တရား လက်ကိုင်ထားရမယ်ဆိုပြီး အကြီးအကျယ် ကြွေးကျော်နေတဲ့ နာမည်ကြီး နာရေးကူညီမှု ခေါင်းဆောင်ကြီးတောင်မှ ရခိုင်က ဒုက္ခသည်တွေကို သွားရောက်ကူညီတဲ့အခါကျတော့ သူခါးဝတ်ပုဆိုးလို တတွတ်တွတ် ရွတ်နေခဲ့တဲ့ ဗြဟ္မစိုရ်တရားတွေကို ခါးချိတ်ပစ်လိုက်ခဲ့ ဖူးတာကိုး။ ရှေ့ဆောင်နွားလား ဖြောင့်ဖြောင့်သွားက နောက်နွားစိုက်စိုက် ဖြောင့်ဖြောင့်လိုက်၏လို့ ဆိုပါတယ်။
မြန်မာပြည်မှာ မြန်မာမွတ်စလင်တွေဟာ မြန်မာလူမျိုးစုပြီးရင် ဒုတိယအများဆုံး လူများစုဖြစ်ပါတယ်။ တိုင်းပြည်တစ်ပြည်ရဲ့ ဒုတိယအင်အားအကြီးဆုံး လူအုပ်စုကြီးကို ဖိနှိပ်လို့ဖြစ်ဖြစ်၊ ဘေးဖယ်လို့ဖြစ်ဖြစ်၊ အဲဒီအုပ်စုကြီးရဲ့ အင်အားကို အသုံးမပြု လစ်လျူရှုလို့ဘဲဖြစ်ဖြစ် တိုင်းပြည်ကို တည်ထောင်နိုင်မယ်လို့ ထင်မြင်ခြင်းသည် ညံ့ဖျင်းနုံနဲ့မှုဖြစ်သည်လို့ အတိအလင်း ဆိုပါရစေ။ အားတော့နာပါတယ်။ ငြင်းနိုင်သူ၊ ငြင်းရဲသူများ ငြင်းလိုက်ပါ။
ဒီမြန်မာမွတ်စလင်(ပသီ)တွေဟာ မြန်မာပြည်လွတ်လပ်ရေးမရခင်ကတည်းက ၁၉၄၆ ရွှေတိဂုံအလယ်ပစ္စယံမှာ ကျင်းပတဲ့ ဖဆပလညီလာခံကြီးက တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုခံထားပြီးသူများဖြစ်သလို၊ တိုင်းပြု ပြည်ပြု၊ လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲဝင် လူမျိုးတွေဖြစ်သလို၊ ၁၉၇၄ခုနှစ်အထိ တရားဝင် အတည်ပြုသတ်မှတ်ထားတဲ့ တိုင်းရင်းသား(၁၄၄)မျိုး စာရင်းဝင်လဲဖြစ်ပါတယ်။ ပုဂံခေတ်ကတည်းက ကျောက်စာဝင် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေပါ။ ဒါကြောင့်လဲ (၉-၉-၂၀၁၂)နေ့ ရန်ကုန်အိဒ်ပွဲတော် အခမ်းအနားမှာ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် နာယကကြီး ဦးတင်ဦးက (၁) မြန်မာမွတ်စလင်များသည် တိုင်းရင်းသားများဖြစ်သည်။ (၂) မြန်မာမွတ်စလင်များကို လက်တွဲခေါ်ဖို့ မလို၊ မြန်မာမွတ်စလင်များသည် တိုင်းပြည်ထူထောင်ရေး၊ လွတ်လပ်ရေးအတွက် ဒိုးတူဘောင်ဖက် အစဉ်အဆက် လုပ်ကိုင်ခဲ့ကြသများဖြစ်သည်လို့ တိုတိုရှင်းရှင်း ပြောခဲ့ပါတယ်။
၁၉၄၇ခုနှစ် ပင်လုံညီလာခံ ပင်လုံစာချုပ်မချုပ်ဆိုမီ ဖေဖေါ်ဝါရီ (၁၁)ရက်မှာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက အမျိုး၊ ဘာသာ၊ သာသနာဆိုတဲ့ ဆောင်ပုဒ်သည် လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲဝင်စဉ်က အလုပ်ဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ ဒီဆောင်ပုဒ်ကို ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတော် တည်ထောင်ရေးမှာ ဆက်သုံးလို့ မရတော့ဘူး၊၊ ဗမာ(မြန်မာ)လူမျိုး ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုပြီး လူမျိုးရေးတရားလုပ်လို့ မရတော့ဘူးလို့ အတိအလင်း ပယ်ချခဲ့တဲ့ ဆောင်ပုဒ်ကို အခု(၆၆)နှစ်ကျော်ကာမှ တိုင်းပြည်မတည်မငြိမ်ဖြစ်အောင် ဘာဖြစ်လို့ ပြန်အသက်သွင်းချင်ရတာလဲ။ အဲဒီမိန့်ခွန်းမှာ ဗိုလ်ချုပ်က အစ္စလာမ်ဘာသာကိုလည်း တိုင်းရင်းသားတွေ ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာတစ်ခုအဖြစ် အသိအမှတ်ပြု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ပြန်လေ့လာကြပါ။
တစ်ကယ်တော့ မြန်မာမွတ်စလင်တွေဟာ တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံ မြန်မာ့လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ ယဉ်ကျေးမှုကို မြတ်နိုးသူများ ဖြစ်ကြတယ်။ အကြမ်းဖက်မှုကို ဘယ်တုန်းကမှ အားမပေး၊ မကျင့်သုံးသူများလည်းဖြစ်တယ်။ ငြိမ်းချမ်းစွာ အတူယှဉ်တွဲ နေထိုင်ကြသူများလည်းဖြစ်တယ်။ မြန်မာ့လူ့ဘောင်ရဲ့ ကဏ္ဍအသီးသီးမှာ အားထားထိုက်သော တာဝန်သိ နိုင်ငံသားကောင်းများလည်း ဖြစ်တယ်။ နှစ်ငါးဆယ် စစ်အာဏာရှင်သမိုင်းကို နှစ်တစ်ထောင်ကျော် မြန်မာ့သမိုင်းလို့ လွဲမှားယူဆနေသူတွေက ပသီအပါအဝင် တိုင်းရင်းသားမွတ်စလင်တွေကို နိုင်ငံခြားသားသဖွယ်၊ သူတို့ ကိုးကွယ်တဲ့ အစ္စလာမ်ဘာသာကို နိုင်ငံခြားဘာသာသဖွယ်၊ မှားယွင်းစွာ ထင်မြင်နေကြတာ ဝမ်းနည်းစရာကောင်းလှပါတယ်။
၂၀၁၂ခု ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာ ထမင်းလုံးအိပ်မက် မက်ကောင်းတုန်း နားရင်းရိုက် အနှိုးခံလိုက်ရတဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး မလိုလားသူများက ဒီအတိုင်းသွားရင် လာမည့်၂၀၁၅ရွေးကောက်ပွဲမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် တိုင်းရင်းသားအင်အားစုတွေလက်ထဲ အနဲဆုံး လွှတ်တော်နှစ်ရပ်ကို ရွှေလင်ပန်းနှင့်တင်ပြီး ဆက်သရတော့မယ်ဆိုတာကို သိလာကြတယ်။ စိုးရိမ်လာကြတယ်။ ၂၀၁၂ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲ ပုံစံမျိုး ၂၀၁၅မှာ မဖြစ်လာရေးအတွက် တိုင်းပြည်မတည်ငြိမ်အောင် နည်းမျိုးစုံနဲ့ အချိန်ယူ အစပျိုး လုပ်ဆောင်နေတာကို ကျနော်တို့ ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေ မမြင်ကြတာကို အံ့သြမိတယ်။
လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေး အစွန်းရောက် လှုံ့ဆော်မှုတွေကို ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေက ကုလားတစ်စုလောက်ကိုဘဲ ဒုက္ခပေးနေတာဆိုတဲ့ သဘောနဲ့ဖြစ်ဖြစ် အခုနုနယ်စဉ်ကတည်းက မသိကြိုးကျင်နေကြမယ်ဆိုရင် ဒီအရှိန်တွေဟာ အချိန်နှင့်အမျှ တစ်ရိပ်ရိပ် မြင့်တက်လာမှာ အသေအချာဖြစ်တယ်။ အခြေအနေတွေ ထိမ်းမနိုင် သိမ်းမရဖြစ်လာပြီး တစ်ကယ်လို့ ၂၀၁၅ရွေးကောက်ပွဲမှာ အင်အားစုတစ်ခုက အမျိုး ဘာသာ သာသနာအတွက် မဲပုံးထောင်လိုက်ရင် – – –
နောင်တရရင် နောက်ကျသွားပါပြီ။ တပ်မတော်က ကတိတစ်ခုပေးပြီးရင် နောက်ကတိတစ်ခု ထပ်ပေးဖို့ အနည်းဆုံး နှစ်နှစ်ဆယ် အချိန်ယူတတ်တယ်ဆိုတာကို မမေ့ကြပါနဲ့။ ဦးနုက ၁၉၆၀ရွေးကောက်ပွဲမှာ ဘာသာရေးမဲပုံးထောင်ပြီး တည်မြဲဖဆပလကို အပြတ်ဖြုတ်ခဲ့တဲ့ သမိုင်းရှိပါတယ်။ သမိုင်းတပတ် လည်မယ်ဆိုရင် ကောင်းသောလည်ခြင်း ဖြစ်စေချင်ပါတယ်။ ဒီနေ့ မွတ်စလင်တွေကို နှိပ်ကွက်ပြီး၊ မနက်ဖန် ခရစ်ယာန်၊ သဘက်ခါ ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်လာမယ်ဆိုရင် အမြဲနိုင်နေသူက နာမည်ကျော် ပွကြီးပါ။
မမေးလည်းဖြေ(၁၁)- ” ၇၈၆” ဆိုသည်မှာ ( By စိန်ဌေးဟန်)
မေး။ ။ အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်များဧ။် ဆိုင်များ လုပ်ငန်းဌာနများဧ။် ဆိုင်းဘုတ်များတွင် 786 (ခုနှစ်ရာရှစ်ဆယ်ခြောက်) ဟူသော ကိန်းဂဏန်း တစ်ခုကို တွေ့ရတတ်ပေရာ ယင်း ’786 ‘ ဟူသည် 7+8+6=21 ကိုကိုယ်စားပြုပီး (၂၁ ) ရာစုတွင် အစ္စလာမ်သာသနာသည် ကမ္ဘာကိုလွှမ်းရမည်ဟူသော အတိတ် နမိတ်ကိုဆောင်ယူကာ အစ္စလာမ် ပြန့်ပွားရေး စီမံကိန်းအား နှိုးဆော်နေသော ကိန်းတစ်ခုဆိုသည်မှာ မှန်ပါသလား ? ။
သို့ရာတွင် အချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တို့မှာ ယင်း ‘786‘ ကိန်းဂဏန်း၏ သဘောသဘာဝကို ရိုးသားစွာ မသိ နားမလည်ခြင်းကြောင့် လည်းကောင်း ၊ အချို့မှာ အစ္စလာမ်အပေါ်တွင် အကောက်ကြံလိုခြင်းကြောင့် လည်းကောင်း ‘786‘ တွင် ပါဝင်သော 786 ကိုပေါင်းလျှင် ၂၁ရသဖြင့် (၂၁)ကို ကိုယ်စားပြုသည် ယင်းသည် ၂၁ရာစုတွင် တစ်ကမ္ဘာလုံး၌ အစ္စလာမ် ပြန့်ပွားရေးအတွက် နိမိတ်ဆောင် စကားလုံး လှုံ့ဆော် စကားလုံးဟု အယူမှားသူကမှား အပူပွားသူက ပွားကြပါတော့သည်။
ဤကိန်းဂဏန်းများကို အခြေခံကာ “786” ဟူသော ကိန်းဂဏန်းတစ်ခု ဖြစ်ပေါ်လာရခြင်း ဖြစ်တော့သည်။ ယင်း ကိန်းမှာ ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ်၏ ပထမဦးဆုံး အာယသ်တော်ဖြစ်သည့် ကုရ်အာန် အဖွင့်ကဏ္ဍ၊ ပါဒ ၁ ဖြစ်သော…..
(၁း၁) ကို အက္ခရာတန်ဖိုးတွက်ထုတ်ထားခြင်းသာလျှင်ဖြစ်ပေသည်။ဤအာယသ်တော၏ အဓိပ္ပါယ်မှာ … ” အနှိုင်းမဲ့ ဂရုဏာရှင်၊ ထာဝရ ဂရုဏာရှင် အလ္လာဟ၏နာမတော်ဖြင့် “ ဟု အဓိပ္ပါယ်ရပါသည်။
သည့်အတွက်ကြောင့်ပင် မွတ်စလင်မ်တစ်ဦးအဖို့ မည်သည့် အလုပ်ကို ပြုမူကျင့်ကြံသည်ဖြစ်ပါစေ မိမိဧ။် တစ်ပါးတည်းသော အရှင့်နာမတော်ကို ရှေ့တန်းတင်သည့်အနေဖြင့် “အနှိုင်းမဲ့ဂရုဏာရှင်၊ ထာဝရဂရုဏာရှင် အလ္လာဟ်၏ နာမတော်ဖြင့်”ဟုရွတ်ဆိုကြရပါသည်။
“အသင့်အား ဖန်ဆင်းတော်မူသော ဘုန်းတော်အနန္တအရှင်၊ ကျေးဇူးတော်ရှင်၏ နာမတော်သည် ကျက်သရေမင်္ဂလာအပေါင်းနှင့် အတိပြီးလေဧ။်” ဟုဆိုထားသဖြင့် မွတ်စလင်မ်တစ်ဦးအဖို့ မိမိအရှင်သခင်၏ နာမတော်ကို စတင်နှလုံးသွင်း တသမိသည်နှင့် တစ်ပြိုင်နက် သစ္စာမာန်တင်းကာ ” ငါ့အရှင်၏ နာမတော်သည် ကျက်သရေမင်္ဂလာရှိ၏ ထို့အတွက် ငါသည် ထိုအရှင၏ နာမတော်ဖြင့် စတင်ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ရကား ငါနှင့် အမင်္ဂလာအလုပ်သည် မအပ်စပ်၊မထိုက်တန်သည်ဖြစ်သဖြင့် ငါမလုပ်၊ ငါသည်မင်္ဂလာရှိသော အလုပ်ကိုသာလုပ်ရမည်” ဟူသော အသိတရားဖြစ်ပေါ်စေရန်ပင်ဖြစ်သည်။
သို့ရှိရာ မွတ်စလင်မ်မှန်လျှင် အလ္လာဟ့်နာမတော်ကို အစဉ်သဖြင့်ဦးထိပ်နှလုံးသွင်း အမှတ်ရကာ မင်္ဂလာကျက်သရေရှိသော အလုပ်ကိုသာ ရွေးချယ်ပြုမူရသည့်အတွက် အလ္လာဟ်၏ နာမတော်ကို တသ သတိရသောအခါ၌ ဖြစ်စေ၊ ယင်းဧ။်အထိမ်းအမှတ် လက္ခဏာဖြစ်သော “786″ ဟူသော ကိန်းဂဏန်းကို တွေ့မြင်ရသော အခါ၌ဖြစ်စေ၊ မင်္ဂလာတရားကို မျက်ခြေမပျက်စေရန် အတွက် မိမိကိုယ်ကိုမိမိ ပြန်သတိပေးရာရောက်သဖြင့် တရားသတိ အစဉ်နိုးကြားနေလေတော့သည်။
ဤသို့ရှိပါလျှင် “786″ ဧ။် အနှစ်သာရများ အနက်တစ်ချက်မှာ ကျက်သရေ မင်္ဂလာရှိသောအလုပ်ကိုသာ လုပ်ကြရန်အတွက် နှိုးဆော်နေသော “မင်္ဂလာတရားနှိုးဆော်ချက် ” ဖြစ်သဖြင့် လောကဓာတ်ကြီးအတွက် မင်္ဂလာရှိစေသဖြင့် ကောင်းမြတ်လှပါဘိတကား။
ဤဖော်ပြချက်များသည် အမှန်ကို ဆိုထားခြင်းသာဖြစ်ပါသည်။’786‘ တွင်ပါသော ဂဏန်းသုံးလုံးကိုပေါင်းလျှင် 7+8+6=21 ဖြစ်သဖြင့် 21 ဂဏန်းကို ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဖြင့် သုံးထားခြင်းသာဖြစ်ရမည်ဟူသော စွပ်စွဲပြောဆိုချက်များ အတွက် မွတ်စလင်မ်တို့ပင် တအံ့တသြဖြစ်ကြရပါသည်။ အကြောင်းမှာ အာရဗီ အက္ခရာတန်ဖိုးအား ထိုသို့ ထပ်ဆင့်ပြန်ပေါင်းလို့မရပါ။ အဓိပ္ပါယ်လည်းရှိမည် မဟုတ်တော့ပါ။ဤယူဆချက်မှာ မွတ်စလင်မ်တို့၏ အယူအဆမဟုတ်ဘဲ အစ္စလာမ်အပေါ် အများသူငါတို့ အကြည်အညို ပျက်လာစေရန် မသမာသူတို့၏ ထွင်လုံးတစ်ခုသာဖြစ်ပါသည်။
အစ္စလာမ်သည် ၂၁ ရာစုကျကာမှ ကမ္ဘာကို လွှမ်းမိုးရမည်ဟု ယူဆသူတို့မှာ ကုရ်အာန်ကိုလည်း နားမလည်၊ အစ္စလာမ်ကိုလည်း မလေ့လာလို့သာဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ အလ္လာဟ်သည် တမန်တော်မုဟမ္မဒ်(ဆွ)ကို စေလွှတ်ခဲ့ရာတွင် “ယှဉ်တွယ်ကိုးကွယ်သူများ မနှစ်မြို့သော်ငြားလည်း ထိုအရှင်မြတ်သည်မိမိဧ။် ရစူလ်တမန်တော်အား အလုံးစုံသောဝါဒ လမ်းစဉ်များထက်ဝယ် ထင်ရှားပေါ်လွင်စေရန် တရားလမ်းညွှန်နှင့် ၀ါဒလမ်းစဉ်အမှန်ဖြင့် စေလွှတ်တော်မူ ခဲ့လေသည်။” (ကုရ်အာန် အစီအတန်းများကဏ္ဍ ၊ ပါဒ ၉)
သို့ရှိလေရာ “ထင်ပေါ်ရင် စင်တော်ကကောက်” ဆိုသကဲ့သို့ ဤအာယသ်တော်တွင် အရာ ခပ်သိမ်းတို့ထက်ဝယ် လွှမ်းမိုးထင်ပေါ်မှု့ဟူသည်
“ထိုသူတို့သည် အလ္လာဟ၏ တရားအလင်းရောင်ကို မိမိတို့၏ ပါးစပ်များဖြင့် ငြိမ်းသတ်လိုကြ၏ ၊ သွေဖီငြင်းပယ်သူတို့မနှစ်မြို့ငြားလည်း အလ္လာဟ်သည် မိမိဧ။် တရားရောင်ခြည်ကို ကုံလုံပြည့်စုံအောင် ပြုထားတော်မူလေသည်” (ကုရ်အာန် အစီအတန်းများကဏ္ဍ ပါဒ ၈)
” ညံ့ဖျင်းမှူ့ဖြင့် ရနံ့သင်းမှု့ကို မတည်ဆောက်နိုင်ပါ ဖြစ်လာသမျှကို သစ္စာအလှဖြင့်သာ ရင်ဆိုင်ကျော်လွှားနိုင်ပါမည်”
မွတ်စလင်မ်တို့ဧ။်ဆိုင်များတွင် ‘786‘ ရေးထားခြင်းမှာ မွတ်စလင်မ်အချင်းချင်းကိုသာ အားပေးကြရန်ဖြစ်သည်ဟု စွပ်စွဲသူတစ်ချို့လည်း ရှိပါသည်။ မွတ်စလင်မ်တစ်ဦးအဖို့ရာတွင် အစားအသောက်စားသုံးရာ၌ တရားစည်းကမ်းများကို လိုက်နာရပါသည်။ စားချင်ရာစား သောက်ချင်တိုင်းသောက်လို့မရပါ။ ဤသို့ စားသောက်မိပါလျှင် အလ္လာဟ်၏ အမိန့်တော်ကို မနာခံရာရောက်သဖြင့် လွန်စွာမှပင် အပြစ်ဖြစ်ရပါသည်။
“အသင်တို့သည် စင်ကြယ်သန့်ရှင်းသော အစာအဟာရများကို စားသုံးကြပီး အကျင့်ကောင်းကိုကျင့်ကြလော့ ” (ကုရ်အာန် ယုံကြည်သူများကဏ္ဍ၊ ပါဒ ၅၁)
” အသင်တို့သည် အလ္လာအသျှင်ပေးသနားထားတော်မူသည်များအနက် တရားဝင် ခွင့်ပြုထားသော သန့်စင်ြပီး ဥပါဒ်ကင်းသော အစာအဟာရများကို စားသုံးကြလော့ ” (ကုရ်အာန် ခဲဘွယ်ဘောစဉ်ကဏ္ဍ ပါဒ ၈၈ )
“အလိုအလျောက်သေသော တိရိစ္ဆာန်၊ သွေး ၊ ၀က်သား ၊ အလ္လာဟ်အသျှင်မြတ်အပြင် အခြားသောအရာကို ရည်စူးထားသော တိရိစ္ဆာန် ၊ လည်လိမ်ညှစ်ပီး သေသောတိရိစ္ဆာန် ၊ရိုက်နှက်ခံရပီး သေသောတိရိစ္ဆာန် ၊ အမြင့်မှကျပီး သေသောတိရိစ္ဆာန် ၊ ဦးချိုဝှေ့ခံရသဖြင့် သင်တို့ ဇဗဟ်လှီးဖြတ်နိုင်သော တိရိစ္ဆာန်မှအပ သားရဲတိရိစ္ဆာန်များမှ ကိုက်ခဲသတ်ဖြတ်ထားသော တိရိစ္ဆာန်များ ၊ ရုပ်ထု ရုပ်ပွားများထားရှိရာဌာနများ၌ ပူဇော်ပသားရန် လှီးဖြတ်ထားသော တိရိစ္ဆာန်နှင့် မဲမြှားတို့ဖြင့် ကံစမ်းခြင်းသည် အသင်တို့အဖို့ “ဟရာမ်” စားသုံးခွင့်မရှိဟု တားမြစ်ထားပြီး ဖြစ်လေသည်။ ဤသည်တို့မှာ ပြစ်မှူ့ဒုစရိုက်များပင်။(ကုရ်အာန် ခဲဘွယ်ဘောစဉ်ကဏ္ဍ ပါဒ ၃ )
တရားတော်က တားမြစ်ထားသော အရာမဟုတ်သည့် အခြားအစားအစာများကိုမူ စားသုံးခွင့်ထားရှိပါသည်။ သည့်အတွက်ကြောင့်ပင် ဘာသာခြားသူတို့ ဖွင့်လှစ်ရောင်းချသော လက်ဖက်ရည်ဆိုင်များ၌ပင် မွတ်စလင်မ်တို့ လက်ဖက်ရည် သောက်နေမှူ့များကို လက်တွေ့တွေ့မြင်နိုင်ကြပေသည်။ အခြားသော လူသုံးကုန်ပစ္စည်းများကိုလည်း ဘာသာခြားတို့ရောင်းချသော ဆိုင်များတွင် အပြန်အလှန် ၀ယ်ယူနေကြသည်မှာလည်း မငြင်းနိုင်သော သက်သေ သာဓကတစ်ရပ်ပင်။ “ခင်ရာဆွေမျိုး၊မြိန်ရာဟင်းကောင်း” ဆိုသည့် ရှေးလူကြီးသူမတို့ဧ။် ဆိုရိုးစကားကိုလည်း မမေ့အပ်ပါ။
” အသင်တို့သည် ဘာသာသာသနာရေးရာ၌ အယူသည်းအစွန်းရောက်ခြင်း မပြုကြလေနှင့်” (ကုရ်အာန် အမျိုးသမီးများကဏ္ဍ ပါဒ ၁၇၁ )
” ဘာသာတရား၌ အယူသည်းအစွန်းရောက်မှူ့အား အထူးရှောင်ရှားကြလေကုန်။ အသင်တို့အရင်ကရှိခဲ့ကြသော သူတို့သည် ဘာသာသာသနာအရေး၌ အယူသည်း အစွန်းရောက်မှု့ ကြောင့်သာလျှင် ပျက်စီးခဲ့ကြရလေသည်။”
This entry was posted on March 6, 2013 at 3:22 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
11 Responses to “(ရဂ၆) နှင့် (၉၆၉)”
March 6, 2013 at 3:24 am | Reply
အသစ်ထွင် ခေါ်ဆိုထားသော စကားလုံးဖြစ်သောကြောင့်၊
လွတ်လပ်ရေးရပြီး နောက်ပိုင်းမှ ပေါ်လာသောကြောင့် ၊
မူရင်း ဘင်္ဂင်္လီလူမျိုးများမှ ဖြစ်ပေါ်လာသောကြောင့် ၊ သမိုင်းအထောက်အထားမရှိသောကြောင့်၊ကျွန်တော်အနေနဲ့ဘယ်လိုမှ အသိအမှတ်ပြု လက်မခံနိုင်ပါခင်မျာ။
ဟုတ်ကဲ့ အခုလို အားပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ် ပရိသတ်ကြီးခင်များ၊ကျွန်တော် ပြောချင်တာလေး ဆက်ပြောပါရစေ။
၉၆၉ ဆိုသော ဂဏန်း သင်္ကေတသည် အသစ်ထွင် ခေါ်ဆိုထားသောစကားလုံးဖြစ်သောကြောင့်၊
မနေ့တနေ့ကမှ ပေါ်ထွက်လာသော စကားလုံးဖြစ်သောကြောင့်၊
အမှတ်အသားနဲ့ ဒီဇိုင်းမှာ အိန္ဒိယမှ အသောက ကျောက်တိုင်မှ ခိုးချထားသောကြောင့် ၊
နဂို ရှိရင်းစွဲ၊သုံးရင်းစွဲ ဖြစ်သော အရဟံ သင်္ကေတအား ဖုံးလွှမ်းစေသောကြောင့်၊
သမိုင်း အထောက်အထားမရှိသောကြောင့် ၊ ကြောင့်၊ ကြောင့်၊?????
အဟဲ ၊ ကျွန်တော် ထပ်မပြောတော့ဘူးခင်မျာ
ကိုယ့်ရဲ့ စိတ်ဆန္ဒနဲ့ ကိုက်ညီရင်တော့ ဝမ်းသာအားရလက်ခုပ်တီးပြီး လက်ခံလိုက်တာပေါ့ဗျာ၊ ကိုယ်လိုတာနဲ့ မညီဘူးဆိုရင်တော့လဲ ဖင်ပိတ်ငြင်းယုံပဲရှိတော့တာပေါ့၊ဒါဟာ လူ့သဘာဝမို့လို့ ဘာမှ မထူးဆန်းပါ။
၊မွေးကတည်းက ပါလာသော ကိုယ်ပိုင် ဦးနှောက်အဖြုထည် သန့်သန့်နဲ့ စဉ်းစားဆုံးဖြတ်နိုင်ကြပါစေ၊
ကိုယ့်ကြိုက်တဲ့ ဆိုင်မှာ လွတ်လွတ်လပ်လပ်ဝယ်ပါ၊ ဒါဟာ လူတယောက်ရဲ့ လွတ်လပ်ခွင့်ပါပဲ၊ ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်လို့ဘာမှ ပြောစရာမရှိပါ၊
အဲ ပြောစရာ ရှိတာကတော့ အဲဒီ ၉၆၉ ဆိုတဲ့ ဟာကြီး ကို နိုင်ငံခြားသား တယောက်ကို အင်္ဂလိပ်လို သွားမရှင်းပြမိပါစေနဲ့၊
အဲဒီ 69 ဆိုတဲ့ ဟာကြီးက သူတို့ အမြင်မှာ sex position လို့ သိထားကြတော့ အကုန်လုံးရှုပ်ကုန်ပါလိမ့်မယ်။
ဟုတ်တယ်လေ၊ သူတို့က ဟိုလို ဒီလို လုပ်တဲ့ဟာကြီးကို ကိုယ်က ဘာသာရေးနဲ့ ဆိုင်ပါတယ် ဆိုပြီး အတင်းဆွဲစိထားတော့၊ နိုင်ငံခြားသားတွေရဲ့ အမြင်မှာ ကိုယ့်ဘာသာ၊ သာသနာ အပေါ် တမျိုးတမည်မြင်ကုန်ပါ့မယ်။ တကယ်လုပ်ချင်တယ်၊မျိုးချစ်စိတ်ဓာတ်ပြင်းထန်တယ်၊ ဘာသာ၊သာသနာ အပေါ် စောင့်ရှောက်ချင်လို့ပါ ဆိုရင်လဲ တခြားဂဏန်းလေးဘာလေး ရှာကြံပြီး ဝိုင်းဝန်း ဆန္ဒပြုပေးကြပါခင်မျာ။
အဲ လွန်သွားပြီ ဆိုရင်တော့လဲ မတတ်နိုင်တော့ဘူး ရှိစေတော့၊
အတွင်း ကြိတ်လေးပေါ့ဗျာ၊ အပြင်ကို မပေါက်ကြားအောင် ရှူးတိုးတိုး လုပ်ကြပေါ့ဗျာ။ မဟုတ်ဘူးလား၊နော့။
March 6, 2013 at 8:22 am | Reply
ကွမ်းယာ ၁၀၀ဖိုး လေးယာမှ ငါးယာသို့(၉၆၉)…ဟုတ်ကဲ့ မိတ်ဆွေများ..ခေါင်းမစားသွားပါနဲ့ …အဖြစ်က ဒီလို
ကျနော့်လမ်းထိပ်က ကွမ်းဆိုင်မှာ ကျနော်ကွမ်းဝယ်လေ့ရှိတယ်…ကျနော်က ဆေးလိပ်ကလည်း စွဲနေတော့ ကွမ်းကို ဆေးလိပ် လျှော့သောက်ဖြစ်အောင် အစိမ့်စားတယ်…အရင်က ၁၀၀ဖိုး လေးယာ..အခု ၁၀၀ဖိုး ငါးယာတဲ့..ထူးဆန်းလို့ မေးကြည့်တော့…ပိုပေးတာတဲ့ ၉၆၉ ဆိုင်ဖြစ်သွားပြီတဲ့…အပိုပေးတာတဲ့…အရှေ့မှာလည်း ၉၆၉ ကဒ်ပြားလေးကပ်ထားတယ်..ကျနော့်ကို မွတ်စ်လင်မ်ဆိုတာ သူမသိဘူးနဲ့ တူတယ်..ကျနော်တို့ နားမှာ ဂေါရခါးတွေ..ဟိန္ဒူတွေများတယ်…သူ့ ဆီက၀ယ်စားနေ ကြပဲ…ဒါနဲ့ ဘာလို့ ပိုပေးတာလည်းဆိုတော့ မူဆလင်(သူ့ လေသံ)တွေ ဆိုင်ထက်သက်သာအောင် လျှော့ရောင်းပြီးပိုပေးတာတဲ့…ဘုန်းကြီးကမှာသွားတယ်တဲ့…အမျိုးသားရေးအတွက် အမြတ်အစွန်းကို အဓိက မကြည့်နဲ့ …အမျိုးသားရေးအတွက် အဓိကလုပ်ပါတဲ့…ဒုက္ခပဲ…တစ်နေ့ လုပ်တစ်နေ့ စား ဗုဒ္ဒဘာသာဝင်တွေဒီတိုင်းဆို ကြာရင် အရင်းမပြုတ်ရင်တောင် တွက်ခြေကိုက်တော့မှာ မဟုတ်ဘူး…အခု ဒီဗုဒ္ဒဘာသာ အစွန်းရောက်တွေလှုပ်ရှားတာက အခြေခံလူတန်းစားတွေမွဲတော့မယ်…ဘယ့်နှယ့်ဗျာ…အမျိုးသားရေးလုပ်တာ အမွဲစားလေးတွေဖြစ်တော့မယ်…ကိုယ်လုပ်နေတာက ဘယ်ကိုဦးတည်နေလဲ…ဖြစ်ဖြစ်မြောက်မြောက်အောင်မြင်ဖို့ ကောရှိလား…မစဉ်းစားမိဘူးနဲ့ တူတယ်..ဘုန်းကြီးကို ဘုရားထင်..ထွက်တဲ့စကား..မြေ၀ယ်မကျ…တွေးမိသလောက်မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဘုန်းကြီးလုပ်ရတာ စားပေါက်အချောင်ဆုံးပဲထင်တယ်…အဲလို့ လူပြိန်းကြိုက်စကားတွေ ပြောတော့ ငတုံးတွေက ပိုယုံ..ပိုကြည်ညို..ပိုလှူ…မကောင်းဘူးလား…ပြောမနာဆိုမနာ ဗုဒ္ဒဘာသာဝင် ငယ်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကိုတောင်နောက်လိုက်တယ်…မင်းဘုန်းကြီးလုပ်ကွာလို့ ..ဟဟ…သူရယ်တယ်…ငါလည်းစဉ်းစားနေတာတဲ့…စော်ကိစ္စမပေါက်ကြားအောင်မင်းတာဝန်ယူရင်လုပ်မယ်တဲ့…ဟဟ…ရီရတယ်…အခု ၉၆၉ ဆိုတာကြီးက မြင်ရကော..ကြားရတာကို စိတ်ထဲမှာ မသိုးမသန့် ကြီး..
ကာမသျှတ္တကျမ်းမှာ လိင်ဆက်ဆံနည်းအသစ်တိုးဖို့ အကြံပြုရမယ်…အရင်ရှိတာ 69(၆၉)လေ နှစ်ယောက်ထဲ…အခုဟာက 969(၉၆၉)..သုံးယောက်ပေါင်းလောင်းကျော်ပေါ့…
ပြီးတော့ငယ်ငယ်က တစ်နေရာရာသွားချင်လို့ အိမ်ကို ကားနဲ့ လိုက်ပို့ ခိုင်းရင် ၉၆၉၃(ကိုယ့်ခြေထောက်ကိုယ်သုံး) လို့ ပြောတာအမှတ်ရတယ်ဗျ..ကိုယ့်ဟာကိုယ်သွား…ကိုယ့်ဟာကိုယ်လုပ်ပေါ့ဗျာ…အခုဟာလည်းအစွန်းရောက်တွေလုပ်နေတာ…ဂဏန်းတစ်ခုလိုနေလား…မသိဘူး..မင်းတို့ ဒီလိုလုပ်လို့ ပြသနာတက်လာရင် ၉၆၉၃ ပဲဆိုပြီး ပြောပြီးရှော်သွားမှာလားမသိဘူး…ဒါမှမဟုတ်လည်း ၉၆၉(969)ဆိုတဲ့ လိင်ဆက်ဆံနည်း အသစ်ကို ကာမသျှတ္တကျမ်းမှာထည့်သွင်းဖို့ အဆိုပြုတိုက်တွန်းပါတယ်..
March 11, 2013 at 4:01 am | Reply
တူမောင်စာရေးလုိုက်တယ်ဘထွေး။ အရီးတို့.ရော မာကြရဲ့ မဟုတ်လား။
ဒီမှာတော့ထူးတယ် ဘဒွေးရေ။ ထူးလို့အကြောင်းကြားလိုက်ရတာပ။
ဘဒွေး ဒီသင်္ကြန် ကို မြို့ တက်ပြီး ဘုရားကြီး လာဖူး မဲ့ ကိစ္စ ရက်ရွှေ လိုက်ဦး ။
ဘာကြောင့် ဆို အခုဟာက သာသနာအရေး အကြီးကြီး ဖြစ်နေတယ်။
၉၆၉ လို့ မှ ရေးမကပ်ထားရင် ဘုန်းကြီးကျောင်းသော သိမ်သော…နားမလည်ဘူး
မြို့ ပြင် ထုတ် ပစ်မယ် လို့သတင်းတွေထွက်နေတယ် ဘဒွေးရေ။
ဟိုေ န့က လည်း .. တရားပွဲတပွဲဟာ.ဆရာတော်ဘုရားတစ်ပါး…၉၆၉ အကြောင်း
ထည့်မဟောလို့ ဆိုပြီး လူတွေထထပြန်ကြတာ ကျီးနဲ့ ဖုတ်ဖုတ်ကိုဖြစ်ကရော ။ ကျုပ်
လည်း လူမရှိတော့မှ တော့ ဆက်မထိုင်နေရဲ တာနဲ့ .. ဆရာတော့အားနာနာနဲ့ပဲ
ဝတ်ချပြီး ထပြေးခဲ့ရတယ်။ လူတွေက တောက်တခတ်ခတ်နဲ့ ..“ ဘုန်းကြီးကွာ.
မြို့ ဘုန်းကြီးလုပ်နေပြီး ၉၆၉ ကိစ္စလေးတောင် ထည့်မဟောဘူးရယ်လို့။ ငါ့နှယ်
ထည့်ဟောလို့ က တော့ လက်ခေါက်တွေပါမှုတ်ပြီး ဂုဏ်ပြုပေးမလို့လုပ်နေတာကို ” ဘာညာ
နဲ့ မချင့်မရဲတောင်ဖြစ်နေကြသေး။ဘုန်းကြိးတရားဟောတာကို လက်ခေါက်မှုတ်အားပေး
မဲ့ သာသနာ့ အာဇာနည်တွေ ကပဲ ဘဒွေးရ။ ကျုပ်ဖြင့် နားတောင်ကျိန်းတယ် ကြားရတာ။
တကယ်တော့ ဆရာတော်ဟောမဲ့တရားက.. ပဋိစ္စသမုပ္မါဒ် ..ထဲက ခန္ဒာဥာဏ်ရောက်
တရားတွေဗျ။ ကျုပ်က ရွာဦးကျောင်းမယ် ဆယ်နှစ်လောက် ဘုန်းကြီးကျောင်းသာလုပ်လာမင့်ဟာ
အရိပ်ပြရင် တစ်ကိုယ်လုံးမဟုတ်တောင် တစ်ခြမ်းလောက်တော့ အကောင်ထင်ပါတယ်။ မြို့ သား
တွေ .. တရားအနှစ်တွေဟောတာကို ဇောက်မှန်းကန်း မှန်းနားမလည်ကြဘူး။ ဒီ ၉၆၉ ပဲ
မက်နေကြတယ် ။ဘယ်လိုဟာလဲ မသိဘူးဘဒွေးရ ။ ဆရာတော် ခမျာ သက္ကာယဒိဌိ နဲ့ ဥစ္ဆေဒ ဒိဌိ
အကြောင်း လေး ပျိုးခါ ရှိသေး ဆုံးအောင်တောင် မဟောလိုက်ရရှာဘူး။ ဖြစ်ပုံနှယ်။
ဒါနဲ့ ကျုပ် က “ မောင်ရင် ရို့. ဆိုဆိုနေကြတဲ့ ၉၆၉ ဆိုတာ ဘယ် လို ဟာမျိုးပါလိမ့်ဗျာ။
ကျုပ် များ လည်းရှင်းပြစမ်းပါဦးတော့” လို့.. မြို့ သားတစ်ယောက်ကိုမေးတော့…………
“ ဟာ အကိုကြီးနှယ် ။ ဒီလောက် အရေးကြီးတဲ့ဟာ မသိသေးဘူးလားဗျ။ အေးလေ အင်တာနက်
မသုံးတော့လည်း မသိရှာဘူးပေါ့။ ကျနော်ပြောပြမယ်။ ဘုရားဂုဏ်တော် ကိုးပါး တရား ဂုဏ်တော်
၆ ပါး သံဃာ့ ဂုဏ်တော် ၉ ပါး ဗျ။ …အဲဒါ ”
“ အော်အော် ။နို့ … အဲဒီတော့ ဘာဖြစ်သတဲ့တုန်း။ အဲဒါက“
” ဗုဒ္ဒဘာသာ မှန်ရင် အဲဒီ ၉၆၉ ဆိုတာကို အိမ်မှာကပ်။ ….သူများတွေကိုလည်း ကပ်ဖို့ လိုက်ပြော။ သာသနာ အဓွန့် ရှည်အောင်လို့ ဗျ။ …ဘာသာခြားတွေ ကြီးစိုးသွားမှာ စိုးလို့ ။
ဒါ သာသနာအရေး။ ”
အဲလို တဲ့ဗျ။ ဘဒွေးရ။.. ဒါနဲ့ အဲဒီ ၉၆၉ ဆိုတဲ့အင်္ကျီကြီးတွေဝတ်ပြီး….ဘုရားကျောင်းကန်တွေမှာ အာဘောင်အာရင်းသန်နေတဲ့ မိန်းမ ဝဝကြီးတွေ ယောက်ျား ဖိုင့် ဖိုင့်ကြီးတွေလည်း…ဗျာ..ပြောလိုက်ကြတဲ့ ..စိန်ကြောင်းရွေကြောင်း
သားကြောင်းသမီးကြောင်း…..ဘုရား အကြောင်း ဖြင့်တစ်လုံး မှမပါပေါင်။……..ဥပုသ် ဥပုသ်နဲ့ 
၁၂ နာရီမထိုးခင် ဗိုက်ထဲကို…ထမင်း လေးငါးလုံးချက်လောက် သွင်းပြီး အတင်းတုပ် ၊ မောတော့
အိပ်ပြီး ပြန်ကြတာမှတ်တာပါပဲ။.. ကိုယ့်မှာ သူရို့ လိုက်ကြည့်နေတာ အကုသိုလ်တောင်ပွားပါရဲ့ 
၉၆၉ ကတော့ဟုတ်ပါပြီ။ဒါဆို အဲဒီ ဘုရားဂုဏ်တော်ကိုးပါး တရားဂုဏ်တော်ခြောက်ပါးလေးများ ရွတ်ပြစမ်းပါဦး တော့ ..ဆိုရင်လည်း .. ထစ်အထစ်အနဲ့ 
ဘုရားဂုဏ်တော်ကိုးပါးတောင်. အမြီးအမောက်မတည့်ဘူး။ . အနုတ္တရောပုရိသ ဓမ္မသာရထိ
ဆိုတာကို ..ဖြောင့်အောင် ထွက်တတ်ကြတာမဟုတ်ဘူး။ ပူလိသ.ဖြစ်လိုဖြစ် အနတ်ဒေါ ဖြစ်လို
ဖြစ်နဲ့ ကြားရတာ အ ဂါရဝ ဖြစ်ချက်တော့။
၉၆၉ တွေ လျောက်ကပ်နေမဲ့အစား…. ဗုဒ္ဒဝင်လေး လှန်ဖတ်နေကြပါလားလို့ ပြောမိ
တာ..လူကို ဝိုင်း ဆဲလိုက်ကြတဲ့အမျိုးဗျာ။ ခေါင်းတောင်မပြူဝံ့ ဘူး။
အခု လည်း သင်္ကြန်အမီ ဘုရားကြီး ကို ၉၆၉ ဆိုပြီး မကိုဋ်တော် မှာရေးသားကပ်လှူ
ပူဇော်ကြစို့ ရယ်လို့ ဆော်သြနေကြတာနဲ့ …… “ဟ ဒါတော့လက်မခံနိုင်ဘူးဟေ့။ ဘယ်နှယ့်
မယောင်ရာဆီလူး.အရေမရ အဖတ်မရ။ မပြောချင်လို့ ကြည့်နေတာကြာပြီ။.မင်းတို့ ဟာမင်းတို့ 
၉၆၉ မကလို့ …ကိုးသိန်းခြောက်သောင်းဖြစ်ဖြစ် မင်းတို့ အဘ နဖူးပေါ်သွားရေးကြချေ။” ဆိုပြီး
ကန့် ကွက်တဲ့လူတွေက ကန့် ကွက်နဲ့ဘရုတ်ဘရုတ်ကိုဖြစ်နေတာပါပဲ။
အဲဒါ ကဆုန် လထဲကျမှဖြစ်ဖြစ် လာခဲံ့ တော့ဘဒွေးရေး။ ဒီ မှာ…တော့… အဲလို…ဟေလာမောင်ရို့ ဝါး ဆိုတဲ့ လူတွေ ကြောင့် ..အခက်တွေပွေနေလို့ .ဘဒွေးပါရောပြိးနားရှုပ်နေမှာစိုးလို့ ။
via Kyaw Win Thant
orginal link=> https://www.facebook.com/kyawwin.thant.5/posts/476871215699774
March 11, 2013 at 4:18 am | Reply
၇၈၆ နှင့် ၉၆၉ တို့ရဲ့ မုတ်ဆိတ် ပြသနာ (သရော်စာ)
သရော်စာ မတ်လ ၁၀ ၊ ၂၀၁၃
ခုတလော မောင်သစ်တို့ ရဲ့ ဟိုမရောက် ဒီမရောက် မယောင်ရာဆီလူး တဲ့
ဖြစ်ကတက်ဆန်း ဖွဲ့စည်းပြီး မည်သူမှ အသိမှတ်မပြုသည်ဖြစ်စေ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ဘွဲ့တံဆိပ်
အပ်နှင်းထားတဲ့ ဒေါက်တိုမောင်သစ် အထွေထွေဆန္ဒပြပွဲ ကော်မတီ၏ ရှေ့ဆက်
ဆန္ဒပြသွားမယ့် ဆန္ဒပြပွဲ ပွဲစဉ်များနှင့် အစီအစဉ်များအား
များမကြာမှီ အချိန်အတွင်းက ထောင်ထွက်အဆံချောင်
ဘုန်းကြီးတစ်ပါး နှင့် လက်ဝါးကြီးအုပ်ဂုတ်သွေးစုပ်
စီးပွားရေး သမား တို့ ပူးပေါင်းကာ ၉၆၉ ဟု
ဘာသာရေး ခုတုံးလုပ် စီးပွားရေး အမြတ်ထုတ်မည့်
မရပ်မနား အော်ဟစ်ဆန္ဒပြမည် ဖြစ်ပြီး
၉၆၉ တံဆိပ်ကပ်ထားသော ဆိုင်များတွင် ဈေးမ၀ယ်ပါက
၀ိုင်းပြီး ဆွမ်းကြီးလောင်းမည်ဟု ဘုကွကျကျ အတိအလင်း
နိုင်ငံမပိုင် ဖွဘုတ် သတင်းများတွင် ဆဲဆိုရမ်းကား ရေးသားထားပါသည်။
အကယ်၍ ၉၆၉ ဆိုင်များတွင် စားသောက်ကုန် ၀ယ်စားသူများ စားမကောင်းသည်ရှိသော်
လူသုံးကုန် ပစ္စည်းအရောင်းဆိုင်များတွင် ဈေးများသည်ရှိသော်
အရောင်းဆိုင်၏ ဆက်ဆံရေး ညံ့ဖျင်းခဲ့သည် ရှိသော်
၉၆၉ အဖွဲ့အစည်းဖြင့် လုံးလုံးသက်ဆိုင်မှု မရှိပဲ ကိုယ်ဖြစ်ကိုယ်ခံဟု
အဆိုပါ သက်မှတ်ထားသော ၉၆၉ ဆိုင်များတွင် ညံ့ဖျင်းလွန်းလှသဖြင့်
အပြောချိုသာယဉ်ကျေး ဈေးသက်သာသော ပစ္စည်းမှန်သော ၇၈၆ ဆိုင်များတွင်
ဈေးဝယ်ခဲ့သည် ရှိသော ထောင်ထွက်လက်မရွံ ဘုန်းကြီးလူမိုက်များမှ
မထင်ရင် မထင်သလို ဆွမ်းကြီးဝိုင်းလောင်းမည်ဖြစ်ကြောင်း
တိုးတိုး တိတ်တိတ် ၀န်နင် ပေးထားပြီး ဖြစ်ကြောင်း
နိုင်ငံမပိုင် အဆဲအဆိုရပ်ဝန်း သတင်းဌာန မှ တဆင့် ပြန်လည်သိရှိရပါသည်။
နောက်ဆက်တွဲ ဆန္ဒပြပွဲ သတင်းများအရ လွှတ်တော်အတွင်း ၀င်ရောက်နေသော မုတ်ဆိတ်များနှင့်
နိုင်ငံတော် အတွင်း ရှိနေသော် မုတ်ဆိတ်များအား အမြင်မကြည် ကြောက်ရွံထိတ်လန့်သော
ပုဒ်မ ဖြင့် ဆေးလိပ်မသောက်ရ ဧရိယာ များ ကဲ့သို့ မုတ်ဆိတ်မထားရ ဧရိယာများ သက်မှတ်ပေးဖို့
လွှတ်တော် အတွင်း တင်ပြ ခြင်း ရင်ဖွင့်ခြင်း များ အစဉ်မပျက် ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း (သည်းခံတော်မူဘာ)
သိရှိရသည့် အပြင် ဖွဘုတ် သတင်းရပ်ဝန်းမှ ဘာသာရေး အစွန်းရောက်များမှ
ဒေါက်တာဆိတ်ဖွားသည်လဲ မုတ်ဆိတ်ကုလား ဖြစ်နိုင်ကြောင်း မျက်ကန်းသတင်းများတွင်
ဖော်ပြခဲ့သည့်အပြင် မွေးမြူရေးခြံများအတွင်းမှ ဆိတ်များအားလဲ DNA စစ်ဆေးပြီး နိုင်ငံသား ဟုတ်မဟုတ်
စစ်ဆေးပြီးမှ စားသုံးသင့်ကြောင်း အဘယ့်ကြောင့် ဆိုသော် မုတ်ဆိတ်ပါရှိသောကြောင့်
ရိုဟင်ဂျာ များ ၏ ဥာဏ်နီဥာဏ်နက်ဖြင့် ကျူးကျော်လာခြင်းလောဟု
၄င်းတို့၏ ဖြုတ်သာသာ ဦးနှောက်များဖြင့် စဉ်းစားတွေးခေါ်ရင်း စိတ်ပူလျက် ရှိကြကုန်၏
နောက်တဖန်လဲ ခရစ်စမတ် ဘိုးဘိုးကြီးသည် မုတ်ဆိတ်ပါသော ကြောင့် ရိုဟင်ဂျာ ဘင်္ဂါလီ ဂိုဏ်းချုပ်ဖြစ်နိုင်ကြောင်း
အမေရိကန် သမ္မတ အိုဘားမဲ ထံ တိုင်ကြားစာများ ပေးပို့ရန် အမျှော်အမြင်ကြီးစွာဖြင့်
နောက်ဆုံးရ သတင်း အနေဖြင့် တရုတ် ဂျပန် ထိုင်း ကိုရီးယား စားသောက်ဆိုင်များအတွက်ကိုလဲ ၉၆၉ ကဲ့သို့
အခါကြီး အတိတ်နမိတ်ကြီး ကိန်းဂဏန်းများဖြင့် ဖွင့်ဖို့ ဆန္ဒပြ နှိုးဆော်သွားမှာဖြစ်ပြီး
ရောသမမွေ ကိန်းဂဏန်းအကြီးစားရဖို့ ပုဒ်မကြီးကြီးဖြင့် ထောင်ပြေးများဖြင့် ပေါင်းကာ
သာသနာဖျက်မယ့် အမှိုက်စား လူဂွစာ ဂိုဏ်းတစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့အတွက်
ပြည်သူလူထုအား အားနေယားနေသမျှ ကာလ ပတ်လုံး
ကားလမ်းပိတ် မတက် ဆန္ဒပြ ပွဲများ စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာ ကျင်းပသွားပါမယ် ခင်ဗျာ….
March 17, 2013 at 1:34 pm | Reply
၉၆၉ ……… ?
ယခုအခါ လူတစ်စုဝါဒဖြန့်၊ အကွက်ချလုပ်ဆောင်နေမှုကြောင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ချို့သည် “၉၆၉” ကိန်းဂဏန်း တစ်ခုအား တွင်ကျယ်လာစေရန် လုပ်ဆောင်လျက် ရှိနေကြပါသည်။ သိလိုသည်မှာ “၉၆၉” ဟူသည် မည်သည်ကို ရည်ညွှန်းသည်၊ ဤကိန်းတစ်ခုအား စွဲလမ်းခုံမင်ခြင်းဖြင့် မည်သို့ထူးခြားမှု ရှိမည်ဆိုသည်ကို ဖြေကြားပေးပါ ဦးရီးတော်။
ငါ့တူမေးတဲ့မေးခွန်းရဲ့ အဖြေဟာ လွယ်ပါတယ် ။ ဦးရီးတော် သိသမျှ ဖြေကြားပေးပါမယ်။ ကနဦး အစသိထား ရမှာက “၉၆၉” ကိန်းဂဏန်းကို “ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ သင်္ကေတပုံဆောင်မှု” အဖြစ် ပြုလုပ်တာကို အချို့သော ရဟန်း တော်တွေနဲ့ ဒကာတွေက နှစ်ခြိုက်ပေမယ့်၊ အချို့သော ရဟန်းတွေနဲ့ ဒကာ၊ ဒကာမတွေက မနှစ်သက် ကြပါ။ မနှစ်ကြခြင်း အကြောင်းလည်းရှိတယ်၊ ငါ့တူ ။
ပထမဦးစွာ “၉၆၉”၏ သင်္ကေတဆောင်ပုံအနက်ကို ပြောရလျှင် ပထမဂဏန်း (၉) သည်-ဗုဒ္ဓ၏ ဂုဏ်တော် (၉) ပါးဒုတိယဂဏန်း(၆) သည်-တရားဂုဏ်တော် (၆) ပါးတတိယဂဏန်း (၉) သည် -သံဃာ့ဂုဏ်တော်(၉) ပါးကို ကိုယ်စားပြုသည်ဟု ပြောကြပါတယ်။ဦးရီးလည်း ဤရည်ရွယ်ချက်ကို အရင်ကတော့ သဘောကျလှပါတယ်။ အခုတော့ မကြိုက်ချင်တော့ပါ။ အကြောင်းကတော့ ဤကိန်းဂဏန်းက မြန်မာပြည်တွင် တွင်ကျယ်လာပါက ခရစ်ယာန်သာသနာ မြန်မာပြည်ကို လွှမ်းမယ့် အတိတ်နိမိတ်ဆောင်တာကြောင့် ဖြစ်တယ်။ ခရစ်ယာန်တွေရဲ့ သမ္မာကျမ်းစာ(Bible) တွင် ကမ္ဘာဦးကျမ်း သည် ပထမဦးဆုံး အစောင်ဖြစ်ပြီး ယင်း၏အခန်း(၅) အပိုဒ် (၂၇) တွင် Methuseleh ” မသုရှလ ” အမည်ရှိ ပုဂ္ဂိုလ် တစ်ပါးအကြောင်း ပါရှိတယ်။ သူ့ရဲ့ အသက်ကို “၉၆၉” နှစ်ဟု ဖော်ပြထားတယ်။ သူဟာ ကျမ်းထဲမှာ အသက်အရှည်ဆုံး ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။
“မသုရှလသည် အသက် နှစ်ပေါင်း ကိုးရာခြောက်ဆယ့်ကိုး (၉၆၉)နှစ် စေ့သော် သေလေ၏။” (ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၅း၂၇)အဲ့ဒါကြောင့် သမ္မာကျမ်းထဲက အသက်အရှည်ဆုံး ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ အသက်နဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ သင်္ကေတအဖြစ် ပုံဆောင်ထားတဲ့ “၉၆၉” က သွားတူနေလို့ သမ္မာကျမ်းကို သက်ဝင်ယုံကြည်လာမယ့် ခရစ်ယာန်တွေ အနာဂတ် ဒီမိုကရေစီ မြန်မာပြည်ကြီးမှာ ထွန်းကားများပြားလာမယ်ဆိုတာပါပဲ။
အမေရိကန်ရဲ့ သြဇာသက်ရောက်မှုဟာ အနာဂတ်မြန်မာ့နိုင်ငံရေး ကဏ္ဍတော်တော်များများမှာ အလိုက်တသင့် ၀င်ဆံ့နေရာယူလာတာနဲ့ အမျှ သူတို့ရဲ့ ခရစ်ယာန်သာသနာကို အထင်ကြီးမှုဖြစ်စေတဲ့အပြင် ၊ သူတို့ရဲ့ သာသနာပြု လုပ်ငန်းတွေဟာလည်း နဂိုကတည်းက အခြားဘာသာတွေက လိုက်မမှီနိုင်တာကတစ်ကြောင်း၊ စနစ်ကျမှုရော လိမ်မာပါးနပ်မှုပါ ကုလား၊ ဗမာတွေက သူတို့ကို ယှဉ်လို့မရတာက တစ်ကြောင်း၊ အခြားအကြောင်းကြောင်း တွေကြောင့် “၉၆၉” ရဲ့ နိမိတ်ဟာလည်း တယ်မကောင်းလှပေဘူး။ အဲ့ဒါကြောင့် ဦးရီးတို့ “၉၆၉”ကို မကြိုက်တာ။
နောက်တစ်ခုက မဟာယနတွေ၊ သျှင်ဥက္ကဌဂိုဏ်းသားတွေ ၊ မိုးပြာဂိုဏ်းသားတွေရဲ့ တစ်ဖက်လှည့် လှည့်ကွက် တစ်ခုလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ငါ့တူ စဉ်းစားကြည့်ပေါ့၊ ” ဘုရားဂုဏ်၊ တရားဂုဏ်၊ သံဃာဂုဏ်″ လို့ပြောရင် ပုဒ်မတွေ ခံရေးရတယ်။ ဂုဏ်ရည်တွေက တစ်ပါးချင်းစီမှာ သီးသန့်ရှိတဲ့ သဘောကို ဆိုလိုတာပါ။ ခုဟာက “၉၆၉” ဆိုပြီး လုံးချထားတယ်။ ဖြစ်ရမှာက ၉၊ ၆၊ ၉ (သို့) ၉, ၆, ၉ (သို့) ၉ – ၆- ၉ ဆိုမှ သဘာဝကျမယ်မဟုတ်လား။ ခုဟာက “၉၆၉” ဆိုတော့ သံသယ၀င်စရာ ဖြစ်လာတယ်။ ဗုဒ္ဓက ကိန်းဂဏန်းတွေကို ကိုးကွယ်ခိုင်းတာ အားထားခိုင်းတာ မဟုတ်ဘူး။ ဘုရားရှင်အပေါ် သက်ဝင်ယုံကြည်မှုနဲ့ လက်တွေ့ဝင်စားတဲ့ အလုပ်ပေးတရား အပေါ်မှာသာ ကြိုးစားခိုင်းထားတာ။ ခုဟာတွေက မဟာယနဘက်ကို နွယ်နေသလိုကြီးပဲ။
“မကောင်းမှုပြုသူသည် ဤဘ၀၌လည်း စိုးရိမ်ရ၏။ တမလွန်ဘ၀၌လည်း စိုးရိမ်ရ၏။ ထိုမကောင်းမှု ပြုသူသည် မိမိ၏ ညစ်နွမ်းသောကံကို သိမြင်၍ စိုးရိမ်ရ၊ ပင်ပန်းရ၏။” (ဓမ္မပဒ-၁၅)
“ကောင်းမှုပြုသူသည် ဤဘ၀၌လည်း ၀မ်းမြောက်ရ၏။ တမလွန်ဘ၀၌လည်း ၀မ်းမြောက်ရ၏။ ထိုကောင်းမှု ပြုသူသည် မိမိ၏ စင်ကြယ်သော ကံကိုသိမြင်ရ၍ ၀မ်းမြောက်ရ၊ ၀မ်းသာရ၏။” (ဓမ္မပဒ -၁၆)
တစ်ထောင်ထဲက သုံးဆယ့်တစ်နုတ်ရင် = ၉၆၉ ရတယ်။
မြန်မာစကားမှာ “ထောင်″ဆိုတာ အဓိပ္ပါယ်အမျိုးမျိုးရှိတယ်။ ကိန်းဂဏန်းကို ပြောတာရှိသလို၊ “ထောင်သည်″(ရပ်တည်နိုင်စွမ်းကို ကိုယ်စားပြုတယ်။) “ထောင်လွှားသည်″(မော်ကြွားနိုင်တာကို ဆိုလိုတယ်။) “ထောင်ပေါင်းများစွာ” “ထောင်တန်တဲ့စကား ရယ်ပေါ့”၊ “ထောင်မြင်ရင် ရာစွန့်”၊ “ပြည်ထောင်စု” ဆိုတဲ့ အသုံးတွေဟာ ပြည့်ဝခြင်းသဘော၊ အားရှိတဲ့သဘောကို ညွှန်းဆိုတာကြောင့် “ထောင်ဂဏန်း” ဟာ ပြည့်ဝစုံလင်မှု၏ သင်္ကေတ၊ အားကောင်းမှုရဲ့ သင်္ကေတ တစ်ခုဖြစ်တယ်။ ဆိုလို တာက “၉၆၉” ဆိုတာ ၁၀၀၀ ထဲက ၃၁ ပယ်ထားမှ ရမယ်ပေါ့။ (၃၁)ဘုံ ၀ါဒဟာ ထောင်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ ၀ါဒတွေအထဲမှာ မပါရှိတော့မယ့် အတိတ်နိမိတ်ပေါ့။ သျှင်ဥက္ကဌဂိုဏ်းသားတွေကလည်း လူသေလူဖြစ် ဆိုပြီး တစ်ခေတ်တစ်ခါက ရေပန်းစား လိုက်သေးတယ်။ သူတို့တွေက (၃၁)ဘုံဝါဒကို လက်မခံကြဘူး။ ပိဋကတ်ကျမ်းလာအောက်ပါ တရားတော်တစ်ချို့ကို ကိုးကားပြီး လိုရာဆွဲပြောကြတယ်။
“ရဟန်းတို့ မျက်စိ၊ နား၊ နှာ၊ လျာ ကိုယ်ကာယတည်းဟူသော ရုပ်တရားတို့ကို တည်ရာထား၍ ထိုသည့် ရုပ်တရားကို အကြောင်းပြု၍ ဖြစ်ပေါ်လာသော အကျိုးတရားဝိဥာဉ်မျှသာ ဖြစ်သည်။ ထိုရုပ်တရား အကြောင်းခံကို ပျက်စီးပါက ထိုအကျိုးဝိဥာဉ်သည် ချုပ်ငြိမ်းလေသည်။(မဟာတဏှသင်္ခယသုတ်)
“၉၆၉” ကို ပေါင်းရင် ၉+၆+၉=၂၄ ရတယ်။ ၂၄ပစ္စည်းလို့ ယူတဲ့သူလည်း ရှိတယ်။ ဒီလို ယူနိုင်ပေမယ့်လည်း ထပ်ပြီးပေါင်းရင် ၂+၄= ၆ ရတယ်။ ရွှေတိဂုံဘုရားပေါ် “လဒ” ( ၆ )ကောင်လာနားခဲ့တဲ့ ဖြစ်ရပ်က သာသနာရဲ့ သင်္ကေတကိန်း “၉၆၉”ရဲ့ ပေါင်းတဲ့ရလဒ်ဖြစ်နေတော့ “၉၆၉” ဟာ မင်္ဂလာမရှိတဲ့ နိမိတ်ဖြစ်နေပါပြီ။
ခုလည်း ခေတ်သစ်အသွင်ရဲ့ ပညာသားပါပါ အခြေကုတ်ယူနေပါပြီ။ မွတ်စလင်ကုလားတွေဆိုတာ ရန်သူအဆင့်မှာ မရှိပါ။ ရှိခဲ့ရင်လည်း သူတို့တွေဟာ မြင်ရတဲ့ရန်သူပါ။ ထေရ၀ါဒီ အမျိုးကောင်းသားတို့ မြင်ရတဲ့ ရန်သူထက် မမြင်ရတဲ့ရန်သူက ကြောက်စရာပိုကောင်းလို့ ရှာဖွေကြပါ။ သတိထားကြပါ။ ‘အ’ချင်ယောင်ဆောင်ရမယ့်၊ ‘ရူး’ချင်ယောင်ဆောင်ရမယ့် အချိန်အခါမဟုတ်တော့တာကို သတိထားကြပါလို့ ပြောဆိုရင်း နိဂုံးအဆုံးသတ်လိုက်ပြီ..ငါ့တူ။
Than Tun OO’s status.
ဘိုးဘွားဘီဘင်အဆက်ဆက်သုံးလာကြတဲ့ အရဟံတံဆိပ်ကို လက်ခံနိုင်တယ်။ ယတြာလိုလိုဘာလိုလိုနဲ့ သောကြာနံကို ၀န်းရံပီး ကိုးန၀င်းကျေလုပ်ထားတဲ့ အယူအဆကြီးတော့ လက်မခံနိုင်ဘူး။
ဒီနေ့ကျွန်တော်ဆိုင်မှာ၉၆၉တံဆိပ်ကိုcrossလုပ်ပြီးဆိုင်အရှေ့မှာကပ်လိုက်တယဒီလိုနဲ့ဆိုင်ဆိုင်ဖွင့်ပြီးဈေးရောင်းနေတုံးဝယ်နေကြဦးဇင်းတပါးရောက်လာတယ်ပြီးတော့မေးတယ်ဒါကာကြီးဘာဖြစ်လို့ကပ်ထားတာလဲအဒါနဲ့ကျွန်တော်ကဘာရယ်မှမဟုတ်ပါဘူးသူများတွေကပ်လို့ကျွန်တော်လဲလိုက်ကပ်တာအဒါနဲ့ဦးဇင်းကပြောတယ်ဒါကာကြီးဦးဇင်းတို့ဗမာတွေကအရူးတွေသူများတွေကဝါးဝါးဆိုရင်သူတို့တွေကလိုက်ဝါးတယ်အမှန်တော့၉၆၉ဆိုတာဘာအခြေအမြစ်မှမရှီဘူးဦးဇင်းကိုတိုင်လဲ၉၆၉ဆိုတာကိုမုန်းတယ်မရုံရင်ဆောက်ကြည့်နေ၉၆၉ဆိုတာမကြာခင်ပြောက်သွားလိပ်မယ့့့််
Credit to Kokyawtelenet Kokyawtelenet
May 15, 2013 at 2:57 pm | Reply
969 ဆိုတာ ဦးနောက်မရှိ့တဲ့ခွေးတွေရဲ့လုပ်ရက်တွေပဲ ။လူစိတ်မရှိတဲ့အောက်တန်းစားတွေလုပ်တာ။ကိုယ်ချင်းစာနာစိတ်လုံးဝမရှိတဲ့ဂျလေဘီတွေလုပ်နေတာ ဗုတ်ဒ က သက်ရှိဆို ခြင် တောင် မသက်ရဘူးလို့ခိုင်းထားတယ်မဟုတ်လား ။ဘာလို့လူတွေလိုက်သတ်နေတာလည်း ဒါတွေကောင်းလားစဉ်းစား ၉၆၉ လူစိတ်ရှိတဲ့ဗု ဓ္ဒဘာသာဝင်တွေက ၉၆၉ ကိုလက်မခံဘူး သူများအသက်စည်းစိမ်တွေကိုဖြတ်စီးတာ ၉၆၉
May 15, 2013 at 3:00 pm | Reply
May 15, 2013 at 3:03 pm | Reply
မုအ်မင်န် တွေရဲ့ လက်နက် သည် ဒိုအာ
May 15, 2013 at 3:17 pm | Reply
၉၆၉ ဂိုဏ်းချုပ်ကြီးရေ မင်းဘယ်လိုသေချင်းဆိုးမျိုးနဲ့သေမလဲစောင့်နေတော့ငါတို့မလုပ်နိုင်ပေမယ့် မင်းတိုစော်ကားနေတဲ့ငါတို့အရှင် ကမင်းကိုခွင့်လွတ်မှာမဟုတ်ဘူး
May 15, 2013 at 4:13 pm | Reply
အလဟာမ်းဒို့ လစ်လ္လာ။ မြင့် မြတ်တော်မူသော အလ္လာအရှင်မြတ်ဟာလောကီမှာရော လောကုတ္တရာမှာပါအစားပေးတော်မူသောအရှင်ဖြစ်တော်မူတယ်ဆိုတာကို သံသယ မရှိ ယခုရက်ပိုင်းတွင်ဖြစ်ပျက်နေသောကိစ္စရပ်များကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်သိရှိနိုင်ပါတယ် တရားသံဝေဂယူလိုသူများဤဖြစ်စဉ်ကိုကြည့်၍သင်ခန်းစာယူနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်